Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Desambra 2019 à 08:31
Endrik'io pejy io tamin'ny 15 Aogositra 2019 à 16:56 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Desambra 2019 à 08:31 (hanova) (esory)
Ny [[Finoana silamo|'''Finoana''' '''silamo''']] (amin' ny [[teny arabo]]: الإسلام / ''Alʾislām'') dia [[finoana abrahamika]] mifototra amin' ny finoana an' [[Andriamanitra]] tokana farany izay tokana (tsy manompo olo-masina na mpaminany) ary amin' ny [[Kor'any]] izay heverin' ny mpino silamo fa boky nandraiketana ny tenin' Andriamanitra (''Allah'', amin'ny teny arabo) ara-bakiteny natao sora-tononina. Ny Kor'any dia nambara tamin' i [[Mohamady]] izay fantatry ny silamo ho mpaminan' Andriamanitra, tany [[Arabia Saodita|Arabia]] tamin' ny taonjato fahafito. Ny fampianarana fototry ny finoana silamo dia ny ''tawhid'', izany hoe ny finoana an' [[Monoteisma|Andriamanitra tokana]] izay tsy ahitana fanompoana hafa afa-tsy ny fanompoana an' Andriamanitra.
Ny [[sonisma]] no sampana lehibe indrindra ao amin' ny finoana silamo izay ahitana ny 9080%n' ny mpino silamo maneran-tany. Iray amin' ny sampana telo lehiben' ny finoana silamo ny sonisma. Miavaka amin' ireo sampana hafa ireo ny sonisma noho ny fomba fiheverany ny fivavahana. Matetika dia lazaina ho "Miozolmana ortodoksa" ny Sonita.
Ny [[shiisma]] dia sampan' ny finoana silamo izay manaiky fa i Ali sy ny taranany no mpandimby an' i Mohamady. Ny Shiita dia 10% hatramin'ny 15%n' ny vakoaka miozolmana maneran-tany, ka ny ankamaroany dia monina ao [[Iràna]] sy [[Iràka]] ary ao [[Bareina]]. Shiita dia manana mpitondra fivavahana ahitana ambaratongam-pitondrana.
Ny [[karijisma]] dia sampan' ny finoana silamo izay teraka tamin' ny fanelanelanana natao tamin' i Ali sy i Mu'awiya raha avy niady tao Siffin izy ireo tamin' ny taona 657. Atao hoe Karijita ny mpino silamo ao aminy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/978074"